パチスロ 押忍！番長３ - umdlalo ka 株式会社パオン・ディーピー
Umshini wakamuva wesakhiwo sikaDaito Giken "Oshino! Bancho 3" uqanjwe kabusha ngokuphelele! Thola uhlelo oluphambili lwe-loop "Kanki Axel" !!
"Umlando wami ... ikhasi elilodwa futhi"
Umshini we-slot odumile "u-Oshino Shin! Bancho 3" (Daito Giken Co, Ltd.) uphinda uqanjwe kabusha njengohlelo lokusebenza lwe-simulator!
[Amalungelo okufinyelela wokusebenzisa izinsiza zegeyimu]
■ Ukugcina: Amafayela akho anjengezithombe ngeke afinyelelwe ngamalungelo adingekayo wokusindisa idatha yomdlalo.
* Incazelo ingahlukahluka ngokuya nge-terminal ne-OS version.
[Amakhasimende athola isaziso se-imeyili lapho uhlelo lokusebenza luqala]
Sicela uthumele i-imeyili ngokuthepha kusixhumanisi esithi "Thumela i-imeyili".
Ngokusekelwe olwazini oluthunyelwe nge-imeyili, uzokwazi ukunikeza imininingwane ngembangela yephutha nokuthi ungabhekana kanjani nalo.
[Amakhasimende angakwazi ukulanda]
[Amakhasimende angakwazi ukudlala umsindo kahle]
Ngaphansi kwaleli khasi [Imibuzo Ebuzwa Njalo] kungaxazululwa ngenqubo echazwe. Sicela ubheke kuyo.
[Sicela ubheke ngaphambi kokuthenga]
■ Ukuthenga ngaphandle kwamamodeli ahambisanayo akuqinisekisiwe futhi ngeke kusekelwa nhlobo. Qiniseka ukuthi imodeli yakho ifakiwe kuhlu lwamamodeli asekelwayo ngaphambi kokuthenga.
■ Uhlelo lwe-Pachislot oluthengile lungakhanselwa uma lukhanseliwe kungakapheli amahora angama-2 ("Khansela insiza kungakapheli amahora angama-2 wokulanda" olunikezwe yi-Google Play). Noma kunjalo, kungathatha amahora angaphezu kwangu-2 ukulanda uhlelo lokusebenza ngokuya ngemvelo yakho yokuxhumana. Uma kunjalo, sicela wazi ukuthi awukwazi ukukhansela.
Ukukhansela uhlelo lokusebenza (kungakapheli amahora amabili ukulanda kuqediwe) kudinga inqubo enqunyelwe echazwe yi-Google Play, ngakho-ke qiniseka ukubheka okuqukethwe ku-URL elandelayo ngaphambi kwesikhathi.
Android 4.2.2 noma kamuva
■ Lapho kulayishwa umkhiqizo, kungahle kube nesisindo.
Futhi, inani lezinombolo elivezwe kuhlelo lokusebenza liyinani lokulinganisa lokugcina, futhi lingahluka kumshini wokulungisa uqobo. Sicela uxwayiswe kusengaphambili.
■ Lolu hlelo lokusebenza ludinga indawo engu-15MB noma ngaphezulu yamahhala kwisitoreji sangaphakathi (umzimba we-smartphone) ne-1.5GB noma isikhala samahhala kwisitoreji sangaphandle (i-microSD, njll).
■ Cishe i-1.5GB yedatha izolandwa ngemuva kokuqeda ukuthengwa kohlelo lokusebenza. Ukulanda kuthatha amashumi emizuzu kuya emahoreni athile (ngokuya ngendawo yokuxhumana).
Uyacelwa uqaphele ukuthi ukusetshenziswa kwemvelo ye-Wi-Fi kunconywe kakhulu ngoba imigqa ye-3G ne-LTE kungenzeka ingakwazi ukulandwa ngenxa yemikhawulo yokuxhumana.
■ Uma ubheka "Vumela ukuvuselelwa okuzenzakalelayo" lapho uphesheya kwezilwandle, kunengozi yokuthi uzongena nezindleko zokuxhumana eziphezulu ngenxa yokuvuselelwa kwenguqulo.
Uma uya phesheya, kunconyelwa ukuthi kungahloliwe "Vumela ukubuyekeza okuzenzakalelayo" ku-Google Play Isitolo.
■ Force ifulege
"Phoqa ifulegi" kumenyu kungokukhokhiswa komuntu ngamunye (isengezo).
Sicela uqinisekise okulandelayo ngaphambi kokubuza.
Futhi, lapho wenza imibuzo, qiniseka ukuthi ucacisa [igama lohlelo lokusebenza] [igama lakho eliyimodeli] [imininingwane yokubuza].
Q. Ikhodi yephutha (isibonelo: 498) iyaboniswa futhi angikwazi ukuyilanda.
A. Kukhona ithuba lesikhala esanele sokugcina noma ukuqoqeka kweserver. Hambisa noma susa idatha engadingekile ngangokunokwenzeka, bese uzama futhi emuva kwesikhathi.
Uma uphawu lungathuthukiswanga, sicela ubheke ku- "Usizo (olukhonjiswe ngenkinobho yemenyu ngenkathi wethula uhlelo lwe-" Play Store ") kuGoogle Play, ucacisa ikhodi yephutha.
Q. Ukulanda akuveli kusimo sokulinda
A. Le phutha livela lapho ukuxhumana ngaphandle kwe-Wi-Fi kwenziwa nge- “Landa kuphela uma kusetshenziswa ibhokisi lokuhlola le-Wi-Fi” elivezwa lapho kulanda.
Sicela uyeke ukulanda bese uzama ukuxhumeka kolunye ulayini we-Wi-Fi, noma unkeckck futhi uzame ukulanda kusuka kwenye indlela yokuxhumana (umugqa we-3G njll).
Q. Ngifuna ukumisa uhlelo lokusebenza
A. Uma ukhetha u- “Phuma App” ku- “Imenyu Yokukhetha”, noma ucindezela inkinobho Ekhaya ngesikhathi somdlalo ukuyeka uhlelo lokusebenza, imininingwane yomdlalo ngaleso sikhathi izosindiswa ngokuzenzakalelayo.
Uma kunedatha ephazamisekile, thinta u- “Game Start” esikrinini sesihloko ukukhombisa ukuqala kwesikrini kokuqinisekisa. Khetha u- "Yebo" ukuze uqalise kabusha kusuka endaweni yokuphazamiseka.
Q. Angikwazi ukulanda yize kunesikhala samahhala esanele kwisitoreji sangaphandle.
A. Ngokuya ngemodeli oyisebenzisayo, yonke imininingwane yohlelo lokusebenza ingagcinwa kwisitoreji sangaphakathi.
Ngamamodeli anesilinganiso sesitoreji sangaphakathi sangaphakathi se-4GB noma ngaphezulu, hambisa noma susa idatha esesitokisini sangaphakathi kwisitoreji sangaphandle kanye, bese uvikela isikhala samahhala se-1.5GB noma ngaphezulu, bese uzama ukulanda futhi.
Q. Ukukhiqizwa kohlelo lokusebenza nomsindo akudlalwa kahle
A. Sicela uzame okulandelayo.
-Misa ngokuqinile izinhlelo zokusebenza kusuka ku- [Izilungiselelo]> [Izicelo]> [Phatha Izicelo]
・ Qala kabusha i-smartphone noma i-cache ecacile
・ Khipha uphinde ufake izinhlelo zokusebenza kabusha
Izimpawu zingathuthukiswa ngo- "buyekeza i-OS", kepha ngokuya ngemodeli, izimpawu zingahle zibe nzima noma kube nezimpawu ezintsha.
Asinacala kunoma yiziphi izinkinga ezibangelwa izibuyekezo ze-OS, ngakho-ke ngicela uzenzele esakho isinqumo.
Q. Ngabe uhlelo lwami lokusebenza luzokhokhiswa njalo ngenyanga?
A. Ngoba lolu hlelo lokusebenza lwe-slot "buy out", uzokhokhiswa kuphela ngokuthenga kokuqala.
Q. Angikwazi ukuthenga imisebenzi eyengeziwe (izengezo)
A. Sicela ubheke okulandelayo.
・ Thuthukisa uhlelo lokusebenza `` lwe-Play Store '' enguqulweni yakamuva
・ Bheka ukuthi i-akhawunti yakwa-Google ngesikhathi sokuthenga kohlelo lokusebenza ifana ne-akhawunti yakwa-Google ku-smartphone
・ Bheka nenkampani ngayinye yezokuxhumana uma inani lokukhokha selifinyelele umkhawulo ophezulu.
(Uma usufinyelele umkhawulo, zama futhi ngenyanga elandelayo)
・ Guqula indlela yokukhokha ibe ikhadi lesikweletu
・ Thintana nabakwaGoogle lapha (http://support.google.com/wallet/bin/request.py?contact_type=contact_policy&policy=wallet)
(Kukhona futhi icala lokwehluleka kwe-Google Play)
Q. Zonke izici ezingeziwe ezithengiwe zikhutshaziwe
A. Ingabuyiselwa mahhala ngenqubo elandelayo.
1. Thepha umsebenzi owengeziwe okhubazekile ku- "Thenga" esikrinini sesihloko.
2.Tap the "Ukuthengwa" ingxenye
3. Khetha u- “Yebo” kumyalezo wokuxwayisa ovelayo.
4. Ngemuva kwemizuzwana embalwa, umyalezo "osuvele uthengiwe" uyavela.
5. Ngemuva ngokuthepha ku- "Buyela Isihloko" esikrinini esifanayo, umsebenzi ohambelana nawo uzonikwa amandla futhi.
6. Uma kunemisebenzi eyengeziwe ekhubazekile, phinda izinyathelo 1-5 ngenhla emsebenzini ngamunye.
* Ukuxhumana kwenzeka phakathi kuka-3 no-4.
Noma kunjalo, sicela wazi ukuthi uma ungeyona i-akhawunti ye-Google ethengiwe, kungenzeka kube namaphutha nezindleko.
Q. Angiyitholi impendulo
A. Izinsuku zebhizinisi lewindows lokusekelwa ziyizinsuku zesonto ngaphandle kwemiGqibelo, amaSonto, amaholide kazwelonke namaholide oNyaka oMusha.
Imibuzo nge-imeyili ihlala yamukelwa, kepha sizophendula ngezinsuku zebhizinisi kuphela.
Ngaphezu kwalokho, kunezimo eziningi lapho impendulo kwikhasimende elenzile lolu phenyo ingafiki.
Sicela usinike imvume yokuthola i- "[email protected]" kanye nama-imeyili athunyelwe kusuka kwi-PC yakho ngaphambi kokwenza imibuzo.
Lolu hlelo lokusebenza lusebenzisa i-CRI, i-middleware "CRIWARE (TM)".
Uyacelwa ukuthi ubheke kokulandelayo kwesaziso selayisense.
I-Paon DP Co, Ltd. https://paon-dp.com/
© DAITO GIKEN, Inc.. / © PAON DP Inc
Izinkawu Slots ngumshini wesitayela se-Vegas isitayela ngesici esisha!
Experience the biggest win in your life on Golden Fish!?
Ama-Talismans of Fortune uhlelo lokusebenza lwekhasino oluthokozisayo kunazo zonke MAHHALA!
Siyakwamukela, badlali! I-Fortune ikhomba wena kumdlalo omuhle wekhasino Omnandi Alchemy! 📯
Siyakwamukela, badlali! I-Fortune ikhomba wena ku-Heart Blom Slom enhle kakhulu!
Shoot Fish Online Latest, Izici izinhlanzi ezivelele zokudubula emhlabeni ukudubula izinhlanzi Online.
I-Halloween Slots iyindlela ethokozisa kakhulu yemidlalo yasekhasino EMAHALA-to-play eyake yaba khona!
Izwa ukuphumelela okukhulu empilweni yakho ku-Idaho Slots!: Isipho:
Uyilungele ukuthokozela kwemishini eshelelayo kusuka eLas Vegas? 💎
🎰 Uhlobo lomshini omusha we-Vegas style slot Machine imidlalo. I-777 SLOTODAY Casino Slots! 🎰
i-king ye-Vietnamese fish - i-version ye-i-legend choir ukuwina iwukuthanda!
i-spin ukuze uzuze, undiza kumnyama, izinhlamvu zemali ezingama-50 000 zamahhala, i-las vegas slot yas.
Thuthukisa ekuhlangenwe nakho okudlala ukuxhuma ku-intanethi. Ngehluzo ezinhle Ngezilinganiso ezingaphezulu
shaya i-jackpot futhi enganqobi i-westeros ku-umdlalo wezihlalo zobukhosi zombuso wama-slot!
win imali yangempela ngama-slots wamahhala!
LOGA UKUTHOLA AMAKHONI AMAHHALA angu-1,000,000! 💰Okuhlangenwe nakho okuhle njengoba ukhona eVasgas.
Amakhadi ahlanganisiwe, Ishumi - I-Pok, i-Bounce - iDummy yimidlalo yamakhadi e-Thai aziwa ngohlelo lokusebenza lwe-Thais. 1 uhlelo lokusebenza kufaka phakathi imidlalo eminingi.
Vula isondo lomklomelo bese uthole isikweletu samahhala kuzo zonke opharetha!
play # 1 khulula Slots umdlalo nge $ 100,000,000 ibhonasi wamukelekile kanye jackpots omkhulu!
ibhingo lamahhala! dlala i-bingo ngamaphazili amnandi, imincintiswano nemidlalo yebhingo!
Dlala i-Lottery Style Free Scratchers, Scratch Cards, futhi Hlola amathikithi!
💰Free Slots Casino Games! 💰 Online amakhasino imidlalo & umshini slot ku Cash Frenzy!
THOLA IZINDLELA EZIPHUMA ZOKWENZA IZINDLELA ZAMVASI ZASIKHULU LASI-LAS
imidlalo ye-poker iyona efunwa kakhulu e-Indonesia
dlala ama-slots amahle kakhulu wamahhala, imishini ye-slot kanye nemidlalo yasekhasino iqonde kusuka ku-vegas
2M Mahhala Ibhonasi! Ama-Best Slot Machines avela ku-Top Vegas Casino Games Online
ama-slots ™ amabhiliyidi ekhasino anikeza okungcono kakhulu isitayela se-vegas kanye nemidlalo yasekhasino!
⚡Best Slots Machines & MAHHALA i-Real Vegas Casino Games. Ibhonasi yamahhala ye-10M - iJackpot! ⚡
"Yini namhlanje izophinde i-spin? 🎰new slotocards albhamu, free zemali, 200 slot imidlalo!
🎰Indlu Esemthethweni Yama-Slots Game wokuzijabulisa🎰Qoqa yonke INDLELA ENG YOKUKHALA YONKE Izinkanyezi!
Dlala imidlalo yama-slot yamahhala online ngebhonasi! I-JITPOTS YAKHE emidlalweni yamahhala engu-50+!
💰Best Slots Machines & Amakhasino Imidlalo. Dlala i-Vegas Slots Online. 2M Izinhlamvu zemali ZAMAHHALA! 💰
Dlala Imidlalo engcono kakhulu engu-777 Slots Online! I-Spin Free Slot Machines & Hit the Jackpots
🏆 # 1 i-ubunifu i-787
Indlela YokuphilaUkuxhumanaUbuciko Kanye NokuklamaIzimoto NezimotoUbuhleIzincwadi NezinkombaIbhizinisiAmahlayaUkuqomisanaImfundoUkuzijabulisaImicimbiUkudla NeziphuzoImpilo NokuqinaIndlu NasekhayaImitapo Yolwazi NedemoAmamephu NokuzulaKwezokwelaphaUmculo NomsindoIzindaba NomagaziniUkuba NgumzaliOkomuntu UqoboIzithombeUmkhiqizoUkuyothengaKwezenhlaloEzemidlaloAmathuluziUkuhamba NezasekhayaIsimo SezuluAbadlali Bevidiyo NabahleliEzezimali